မဲမသမာမှုတွေ အရင်ဖြေရှင်းပြီးမှ အစိုးရဖွဲ့ဖို့ ဦးဝင်းထိန်ဖြေကြားခဲ့သလား ? – Think Before You TRUST
Home>>သတင်းအတုစစ်ဆေးခြင်း>>နိုင်ငံရေး>>မဲမသမာမှုတွေ အရင်ဖြေရှင်းပြီးမှ အစိုးရဖွဲ့ဖို့ ဦးဝင်းထိန်ဖြေကြားခဲ့သလား ?
တွေးပြီးမှယုံJanuary 20, 2021
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD ကပဲ အစိုးရဖွဲ့နိုင်တဲ့ ပမာဏနဲ့ ပြန်လည်အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို အစိုးရဖွဲ့ဖို့ မဲပမာဏရလာတာနဲ့ အမျှ အစိုးရဖွဲ့ဖို့ အတွက်လည်း ပြင်ဆင်ရတော့ပါမယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမှာ အသစ်ဖွဲ့စည်းမဲ့ အစိုးရနဲ့ ပတ်သက်လို့သတင်းတွေကလည်း မျိုးစုံပေါ်နေပါတယ်။ အခုမှာဆိုရင်လည်း “မဲမသမာမှုတွေ အရင်ရှင်းပြီးမှ အစိုးရဖွဲ့ဖို့ ဦးဝင်းထိန်ပြောကြား” ဆိုတဲ့ သတင်းစာဖြတ်ပိုင်းပုံကို Nay Thurain နာမည်နဲ့ ဖေ့ဘွတ်အကောင့်ကနေဇန်နဝါရီ ၁၉ရက်နေ့၊ နေ့လည် ၂နာရီအကျော်တွင်ပဲတင်ထားခဲ့ပါတယ်။ ဒီသတင်းကို ဒီနေရာမှာ ဖြန့်ဝေထားပါတယ်။
ဒီသတင်းစာဖြတ်ပိုင်းပုံ သတင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ တွေးပြီးမှ ယုံကနေ အောက်က အချက်အလက်တွေ အရ လုပ်ကြံဖန်တီးထားတဲ့ သတင်းအမှားဆိုတာကို အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီသတင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ တရားဝင်မီဒီယာတွေမှာ ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါဘူး။
NLD ပါတီရဲ့ ဗဟိုပြန်ကြားရေးကော်မတီဝင် တစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးကြည်တိုး ရဲ့ Facebook Account ကနေလည်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် သဘာပတိ ဦးဝင်းထိန်ဟာ ဩဂုတ်လကတည်းက နေပြည်တော်မှာရောက်နေတာဖြစ်ကြောင်းနဲ့၊ မီဒီယာတွေနဲ့ တွေ့ဆုံခြင်း၊ အင်တာဗျူးပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းမျိုး မရှိသေးကြောင်း ပြောကြားထားတာကို ဒီနေရာမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
တွေးပြီးမှယုံကနေ NLD ပါတီရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ မုံရွာအောင်ရှင်နဲ့ ဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်မေးမြန်း အတည်ပြုခဲ့ရာမှာလည်း ဒီသတင်းဟာ ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်အောင် လုပ်ကြံဖန်တီးထားတဲ့ သတင်းအမှားသာဖြစ်ကြောင်း ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒီသတင်းကို ဖြန့်ဝေခဲ့တဲ့ Nay Thurainအကောင့်ကို ဝင်ရောက်စစ်ဆေးခဲ့ရာမှာလည်း NLD ပါတီကို ဦးတည်ပြီး သတင်းတုတွေ အမုန်းစကားတွေကို ဖြန့်ဝေနေတာ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲကာလတလျှောက်မှာလည်း သတင်းတုတွေ အမြောက်အများထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ အခုချိန်မှာလည်း အစိုးရဖွဲ့ရေးလို အရေးကြီးတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း သတင်းတုတွေက ထပ်မံပေါ်ထွက်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ရပ်တွေဟာ အများပြည်သူကို နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ အထင်အမြင်လွဲမှားအောင်လုပ်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သတင်းတုတွေ့လို့ စစ်ဖို့အခက်အခဲရှိခဲ့ရင် တွေးပြီးမှယုံ ရဲ့ Chat Box နဲ့ အချက်အလက်စစ်ဆေးပေးရန်ပန်ကြားလွှာမှာ အချက်အလက်ဖြည့်သွင်းပြီး လာရောက်မေးမြန်းလို့ ရပါတယ်နော်။
ကိုဗစ်မျိုးစိတ်ကွဲ ဧရာဝတီစင်တာမှာ စတင်တွေ့ရှိ ဆိုတဲ့ သတင်းအမှား
အာဏာသိမ်း​စစ်ခေါင်း​ဆောင် မင်း​အောင်လှိုင်နဲ့ ကန်သမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒန်တို့ Video Conference နဲ့​တွေ့ကြတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတု
April Fool အလုပ်ခံလိုက်ရတဲ့ KIA သတင်း
ယူကရိန်းပြည်သူများက မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အတူ ရှိနေကြောင်း ဆန္ဒဖော်ထုတ်ကြဆိုပြီး ပြုပြင်ထားတဲ့သတင်းဓာတ်ပုံများ